Xog hoose Mahiga Oo Furay Gabdho Soomaali Ah oo Aad Ubadan imisa Ayeey Garayaan Tolow
Waxaa jira warar sheegaya in Ergayga QM u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Agoustina Mahiga ee xaruntiisu tahay Caasimada
Soomaaliya uu haatan la qal galay Gabar u dhalatay dalka Soomaaliya xili Magaalada Muqdisho lafilayo in wasiirada cusub lagu soo dhawaaqo , jawigana yahay malmahaan mid dagan , marka laga reebo dilal qoesheeysan.
Lama oga Sababta ku kaliftay in Gabar Soomaaliyeed ay haatan la aqal gasho Agustina Mahiga Oo isgu asal ahaan ka soo jeeda dalka Tanzania, inkasta oo Mahiga horay loo sheegay inuu horay u guursaday gabdho Soomaaliyeed isgoo kuwaa haatan ay kala tageen waxan mida haatan noqoneysaa midii ugu danbeysay ee uu haatan la qal galo.
Ergayga QM u qaabilsan Soomaaliya ayaa isagu la sheegaa inuu yahay nin si aad ah ujecel la socodka gabdhaha Soomaalida inkasta oo dadka qaar ku xantaan inuu yahay nin marar badan horay u xumeeyay gabdho Soomaaliyeed.
(Sawiro) Kulan Gogol Xaadh U Ahaa Hirgalinta Jaamacada Umadda Soomaaliyeed Oo Ka Dhacay Magaalada Buuhoodle&
Kulan loogu gogol xaadhayey sidii Jaamacada Umadda Soomaaliyeed ee Buuhoodle looga hirgalin lahaa gudaha Magaalada Buuhoodle ayaa ka dhacay xarunta Jaamacada Umadda Soomaaliyeed ee Magaalada Buuhoodle, iyadoona kulkaasi ay kasoo qayb galeen Gudoomiyaha Jaamacada Umadda Soomaaliyeed ee Buuhoodle, qaar kamid ah maamulayaasha dugsiyada kala duwan ee Magaalada Buuhoodle, Waxgarad, Aqoonyahano, Dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tira badan.
Hadaba kulankani ayaa waxaa ugu horeynba ka hadlay Gudoomiyaha Jaamacada Umadda Soomaaliyeed ee Buuhoodle Prof Ibraahim Maxamed Saciid (Balayax), isagoona ka warbixiyey qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay Jaamacadani.
Sidoo kale waxaa iyana halkaasi hadalo kala duwan kasoo jeediyey madaxdii kasoo qayb gashay kulankani, kuwaas oo dhamaantood ka dhawaajiyey sida weyn ee ay u taageerayaan hirgalinta Jaamacadani.
Isku soo wada duuboo hirgalinta Jaamacadani ayaa qayb ka noqonaysa horumarka balaadhan ee sanadihii ugu dambaysay ay busha weynta ku dhaqan Deegaanada Sool, Sanaag, iyo Cayn ay ka gaadheen dhanka waxbarashada, iyadoona Jaamacadani ay noqonayso midii labaad ee laga hirgalinayo guud ahaanba Deegaanka Buuhoodle tan iyo markii ay dhacday Dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Xafiiska Wararka Ee Jornalizem
War Deg Deg ah:Xildhibaanada iyo Odayasaha Beesha Murusade oo aansi leexad laheyn loogu sheegay in beeshooda boos uga banaaneen Wasiirna Soo socda
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa si aan leexad laheyn ugu sheegay Xildhibaanada iyo Odayasaha Beesha Murusade in Xukuumada Cusub ee la dhisayo in uusan boos uga banaaneen Wasiirna loo heyn Beesha Murusade .
Xildhibaanada Beesha Murusade iyo Odayaasha Beesha ayaa Caawa Madaxweyne Xasan Sheekh ugu tagay Xarunta Madaxtooyada si ay uga wada hadlaan Wararka ku aadan in Xubintii Golaha Wsaiirada Beesha Murusade uu daaqada kaga saarayo Madaxweynaha .
Xildhibaanada iyo Odayaasha Beesha Murusade ayaana Madxaweynaha kala hadlay sidii Beesha Murusada oo kamid ah Beelaha waa weyn ee Soomaaliyeed ay uga heli lahaayeen Xaqooda Golaha Wasiirada ayna lamid yihiin beelaha kale ee helaya Wasiirada.
Madaxweynaha ayaana si aan gambasho laheed Waji farxad lehna aysan ku jirin Odayasaha iyo Xildhibaanada Beesha Murusade dhagtooda ugu dhibciyay Golaha Wasiirada aan laga badin doonin 9-Wasaardaood wax wasiir ahna aysan Murusade heli doonin labada Wasiir ee Hawiyana lakala qoondeeyay
Waxaana fadhiga kasoo kacay oo Xarunta Madxatooyada caawa kasoo dareeray iyaga oo careesan Xildhibaanadii iyo odayasahii Beesha Murusade kuwaa oo caawa iyaga oo careesan guryahdooda kusoo laabtay .
Ma ahan Beelaha loo sheegay in aysan Wax wasiiro ah ka heli doonin Xukuumada Cusub Beesha Murusade oo kaliya waxaana jira Xildhibaano badan oo sidaan oo kale loogu sheegay in beelahooda Golaha Wasiirada wax ka heli doonin kuwaa oo hada isku balansanaya sidii ay codka diidmada ugu qaadi lahaayeen Wasiirada lasoo magacaabi doono iskuna sii balansanaya si loo diidi lahaa Wsaiirada uu R/Wasaare Sacaid ku dhawaaqi doono.
Daawo Muuqaal Murugo Badan ''Xaaskeyga aad ayaa u jeclaa in ay iga kufsadeen ayay hadana iga Daldaleen Naxriis daradooda ''
Waraysiga ayaa lagu soo qaatay barnaamijka Arimaha Bulshada oo Soomaalida aad u jeceshahay iyadoo uu soo tabinayey Maxamed Muse Nuur oo ku magac dheer Deeqdarajo
Magaca Haweeney reer Somaliland ah oo loo magacabayo RW ku-xigeen, ahna wasiirka arimaha dibeda
yadoo lagu wado in saacadaha iyo maalmaha soo socda lagu dhawaaqo Xukuumadda cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan in xilka Ra’isul wasaare ku-xigeenka 1aad ahna wasiirka arimaha dibeda loo magacaabayo haweenay ka soo jeeda degaanada maamulka Somaliland.Warku wuxuu intaasi ku darayaa in gabar si weyn looga yaqaano degaanada maamulka Somaliland lagu wado in laga dhigo Ra’isul wasaare ku xigeenka 1aad ee Xukuumadda Ra’isul wasaare Shirdoon, ahna wasiirka arimaha dibeda taasoo magaceeda la yiraahdo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan.
Haddii uu dhab noqdo warkan ayaa waxay noqoneysaa markii ugu horeysay taariikhda oo ay gabar ka noqoto Soomaaliya Ra’isul wasaare ku xigeenka 1aad iyo wasiirka arimaha dibeda, waxaana loo maleynayaa in arrinkaasi uu la xiriiro balanqaad uu Madaxweynaha Soomaaliya siiyey haweenka Soomaaliyeed xilligii uu waday ololihii uu ku doonayey qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Dhinaca kale, waxaa weli muran ka taagan yahay tirada Golaha wasiirada cusub oo warar qaar ay sheegayaan in laga dhigayo 10-wasiir, halka warar kalena ay sheegayaan in Golaha wasiirada loo deyn doono sidoodii hore oo aheyd 18-kii wasiir, iyadoo xarunta madaxtooyada ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee magacaabista Xukuumadda cusub ee Soomaaliya, taasoo la sheegay inay ka duwanaan doonto xukuumadihii hore.
Xukuumadda cusub ayaa la sheegay in badankeedu ay tahay wejiyo cusub, inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in Xukuumaddaasi iyada oo dhan ay noqon doonto mid ka kooban wejiyo cusub, halka wararka kale ay sheegayaan in dad aan tiro badneyd oo ka soo mid noqday Xukuumadii KMG ahaa gaar ahaan tii Farmaajo ay xubno ka noqon doonaan wasiirada cusub ee lagu wada in dhawaan lagu dhawaaqo, wax ka yar todobaad ayaana ka hartay mudada uu bisha ah ee dastuurku uu sheegayo in RW looga baahan yahay inuu ku soo magacaabo golihiisa wasiirada.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay kulamo ay maalmihii ugu dambeeyay yeelanayeen saddexda mas’uul ee ugu sareysa dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu dambeyntii isku raaceen in la yareeyo wasiirada cusub, isla markaana la badiyo agaasimayaasha guud oo iyagu noqonaya lafdhabarka fulinaya howlaha wasaaradaha, waxaa kale oo la sameynayaa wakaalado si toos ah u hoos taga Madaxweynaha kuwaasoo aan la ogeyn qaabka iyo sida ay noqonayaan, waxaana laga yaabaa in la baabi’iyo wasaarado horay u jiray, lagana dhigo wakaalado.
Maamulka Faroole oo Raisul wasaarihii xilka ka degay ku amray inuu ka baxo Puntland iyo xiisad ka taagan Boosaaso
Saraakiisha ciidanka Booliska maamulka Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa la sheegay iney amar ku siiyeen raisul wasaarihii xilka ka degay ee Somalia C/wali Maxamed Cali Gaas inuu isaga baxo magaladaas iyo degaanada Puntland, iyadoo xiisad arintaas ka dhalatayna laga soo sheegayo magaalada Boosaaso.
C/raxmaan Faroole madaxweynaha maamulka Puntland ayaa bilaabay inuu shacabka Puntland ku sanduleeyo iney aqbalaan xili kororsi hal sano ah oo uu damacsan yahay inuu xafiiska ku sii joogo ka dib markii ay u dhamaatay afar sanadood oo uu xilkaas hayey, waxaana Faroole uu adeegsanayaa ciidanka Puntland si uu u caburiyo siyaasiyiinta iyo dadka ka soo horjeeda xukunka uu sida guracan ku raadinayo
Safaarada Soomaalida ee Dalka Masar oo wali qilaaf darteed u xiran(Daawo Muuqaal ahaan)
Iyadoo baryihii ugu danbeeyay eey soo if baxaayeen khilaafyo u dhaxeeya safiirka iyo qunsulka safaarada Soomaliya ee dalka Masar ,ayaa khilaafkaasi soo shaacbaxay kadib markii la sheegay in la jabsaday Xafiiskii Qunsulka iyo xafiiskii waaxda socdaalka iyo Baasaboorada.
Mar aan booqanay Safaarada ayaa gabi ahaanba wax shaqa ah aney ka socon islamarkaana eey albaabadu u xirnayeen , ardeydii kalahaa howlaha safaaradana eey ka laabanaayeen albaabka safaarada Maadaama laguda galay xiligi diraasada
Mar aan la xariirnay Qusnulka Safaarada Somaliyeed Ismaciil Cabdi Xusseyn ayaa wuxuu inoo sheegay in 25kii octoobar oo aheyd maalinta carafa safaaradana eey ku jirtay xiligii fasaxa ciida ayaa la jabsaday labadaa xafiis wuxuuna intaa raaciyay in arintani ay tahay sharci darro qayixan
Waqtiga lajabin karo xafiiska eey tahay waqti eey geeri ku timaado ama uu safar ku maqanyahay waqtiga shaqada looga baahnaana soo xaadiri waayo taasna waxaa fulin kara gudi maxkamada dowlada kasocda lkn waxaa wax laga xumaado ah in mas’uul jooga kuna jiray xili fasax ah la jabsado xafiiskiisa waa sida uu hadalka u dhigaye uuna war geliyay wasaaraddaha Arimaha Dibadda iyo gudaha ee Dowlada Soomaaliya, tallaabada ugu haboonna ay iyagu ka qaadan doonaan.
Sidoo kale waxa uu intaas raaciyay in uusan la xiriirin hay'adaha amniga ee Masar, maadama ay arintani tahay arin quseysa Dowladda Soomaaliya Qaasatan Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Dalka Masar
(Daawo Sawiro)Warbixin Xaflad kadhacday Dubai Soomalidii oo badankood diiday iney istaagaan markii calanka Ethiopia laqaadayey
Waxaa kadhacday magaalada Dubai xaflad lagu casumay madaxweynaha Kilinka shanaad ee soomali ogaadeniya waxaa casumaadaa jeediyey Jaaliyada kudhaqan magaalada Emaardka ee Soomali itoobiya.
Hadaba halkaas waxaa lagu soo casumay soomalida ku dhaqan dalka imaardka .
Laakin waxaa halkaas kadhacay falal aan lafileen inuu kadhaco falkaas oo ah in somaalida kasoo qeyb gashay eynan istaagin markii calanka dalka itoobiya lagaraacay .
Halkaas oo eey ku sugnaa Madax iyo qunsuliyada dalka itoobiya.
halkaasna waxaa ubadnaa soomali aad ufara badan .
falka kale isaganu waxa uu ahaa in loo istaago daqiiqad madaxweynihii hore ee dalka itoopiya laakin soomali badan ayaa diiday iney u istaagaan oo kursigoodi kufadhiyeen.
Jornalizem Office in UAE
Shiikh Shariif oo Soo kala Dhaxgalay Madaxwaynaha iyo R/wasaaraha iyo Qabiilada Helay Wasiirada iyo Kuwa Waayay oo la helay!!!
Baarlamaanka somalia oo Gabi ahaanba Ka careysan Hanaanka siyaasadeed ee Madaxweynaha somalia oo gabi ahaanba Daaqadaha ka xirtay saxaafadana Ka Gaabsaday Tan iyo Horaanti Marki la caleema saartay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu siyaasad ahaan U qorsheeyay Wasaarada Xukuumada In la koobo si awooda Ugu koobnaato isaga iyo Xukuumada Kooban,Hadaba Qaar katirsan Baarlamaanka ayaa waxa ay Ka biyo diidsan Yihiin Hanaanka Madaxweynaha oo isagu Jilayo In Qaab xisbiyeed Ku guleestay Doorashada somalia
Dhanka Kale Baarlamaanka ayaa Iyagu u diyaarsan Ineey codka diidmada Ku salamaan xubno sagaal Wasaaradood Gaarayo Walow reysul wasaaraha arintaasi ka xunyahay Madaama Reysul Wasaaraha uu ka dharagsanyahay Natiijada soo bixi doonto Markii lagu diido Laba jeer Kal fadhiga Baarlamaanka oo isaga diriishada Ka baxayo sida Cahdiga ku qoran..
Sida wararka hoose aynu Heleyno ayaa sheegaya In Madaxweynihii Hore ee Soomaaliya Shariif soo kala dhex Galay islamarkaasina Madaxweyne Xasan sheekh Ku qanciyay in Wali aanan la gaarin Xiligii La yareen lahaa wasaradaha xili Qabaailka wali ay dhexda Uga jiraan awood qeybsiga 4.5 oo ah Muraayad la iska Daawado.
Xisbiga Madaxwaynaha oo awood ahaan hesta Awooda Dalka ayaa Iyagu Markani waxay wadaan Janbal ah In Reysul wasaaraha xukumadiisu noqoto Mid aanan Awood laheen Maadaama ay wataan Inta badan wasiirada in ay Qaataan Iyaga.
Guud ahaan Wasaaradaha 9 ka Wasaaradood Ayaa waxaa kala qaatay sida aan warar ku helayn Qabiilada Hoos ku xusan waxaana waayay :
Beesha Hawiye Waxaa helay 2 da Wasiir
Waxaana Qabiilka Hawiye Waayay Qabiilada Hoos ku xusan:
Beesha Darood Waxaa helay 2 da Wasiir
Beesha Digil Iyo Mirifle Waxaa helay 2 da Wasiir
Beesha Mirifle ,Liisaan
Besha digil ,Bagadi
Waxaana Qabiilka Digil Iyo Mirofle Waayay Qabiilada Hoos ku xusan:
Besha Raxaweyn, Digil, Dabare
Beesha Raxaweyn, Mirifle, Eelaay
Waxaana Qabiilka Daarood Waayay Qabiilada Hoos ku xusan:
Beesha Leel Kase
Beesha Dir Waxaa helay 2 da Wasiir
Beesha Dir ,Isaaq Habar Jecel
Beesha Dir ,Biimaal
Waxaana Qabiilka Dir Waayay Qabiilada Hoos ku xusan:
Beesha Dir Gudubiirsi
Beesha Dir, Surre
Besha Isaaq Habar Hoonis
Beesha Shanaad Waxaa helay 1 ka Wasiir
Beesha Shanaad .Reer Aw –Xasan
Waxaana Beesha Shanaad Waayay Qabiilada Hoos ku xusan:
Beesha Jareer wayne
Beesha Reer Banaadiriga
War Deg Deg ah :Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo la Shaaciyay Halka oo u Guurayo iyo Maalinta uu Baxayo oo la Shaaciyay
Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la filayaa in uu maalinta arbacda oo taariikhdu 31-ka October in uu u soo guuro magaalo madaxda dalka Uganda ee Kampala , kadib markii halkaa looga diyaariyay guri uu dego.
Sheekh Shariif ayaa la filayaa in marka uu Kampala soo gaaro kadib uu ku dhawaaqo xisbi siyaasadeed cusub oo uu doonayo in uu kaga qeyb qaato loolanka siyaasadeed ee dalka ka jira inkastoo aan la ogeyn cida uu doonayo in uu isbaheysi la sameysto maadaama ay hore isu khilaafeen kooxdiisii AALA SHEEKH oo ay halgan dheer oo Eritrea kasoo bilowday soo wada galeen.
Tan iyo markii uu Sheekh Shariif sida xun ugu guul dareystay loolankii madax weynenimada soomaaliya 10-kii September 2012 ayaa la sheegayaa in uu lumiyay saaxiibo aad ugu dhawaa haatana uu doonayo in uu helo rag cusub oo uu kula bahoobo dhinaca siyaasada maadaama uu doonayo in uu galo halgan culus oo uu ku ku baadi goobayo sidii uu dib masraxa siyaasada uga soo muuqan lahaa.
Gobolo & Degmooyin ku yaala dalka Mareeykanka oo laga Qaxay, Waa maxay sababta (Daawo Muuqaal+Warbixin) !!
Kala carar iyo is abaabul ebid kii ugu darnaa ayaa ka taagan gudaha dalka Mareeykanka ka dib markii Shacabka dalkaas loo sheegay inay ku soo wajahan tahay Dabeeysha halista ah ee loo yaqaan (Hurricane Sandy).
Dabeeshaan oo Duufaan iyo Roobab xoogan wadata waxa ay ka soo bilaabatay maalmo ka hor dalalka Cuba iyo Haiti waxeeyna dalalkaas isku dar ku soo dishay 59-Qofood.
Qaar ka mid ah Gobolada iyo Degmooyinka dalka Mareeykanka inta badan dadkii degnaa weey iskaga baxeen waxaana goobahaas ka maqan Dabkii iyo Korantadii oo la jaray si aysan Duufaanta Hurricane Sandy wax yeelo xoogan ugu geeysan dadka.
Meelaha ugu daran ee laga Qaxay waa South Carolina iyo Cape May oo ka tirsan New Jersey una jirta magaalada New York City 200 oo KM. Shaqaalaha Dawlada iyo Caruurtii Iskuulaadka magaalooyiinka Washington iyo Philadelphia ayaa gebi ahaanba la fasaxay.
Wadooyinka ugu caansan dalka Mareeykanka ee isku xira Gobolada dalkaas waa Buundooyinka lagu magacaabo Holland iyo Brooklyn-Battery waxeeyna xiran yihiin maalintii labaad oo xiriir ah.
In ka badan 7.400 oo Diyaarado ka imaan lahaa dunida oo idil iyo kuwii ka duuli lahaa dalka Mareeykanka ayaa ilaa amar dambe dib loo dhigay. Xawaararaha Duufaanta Hurricane Sandy ayaa waxaa lagu sheegay 1-saac in ay ku socon karto 44-Km.
In ka badan 700.000 oo Qoys ayaa iskaga hayaamay Aqaladoodii ama guryahoodii waxeeyna dadkaan u hayaameen Gobolo kale oo fog fog. Sanadkii la soo dhaafay waxaa sidoo kale dalka Mareeykanka ku dhufatay Dabeeysha loo yaqaan Irene-Hurricane waxaana xiligaas ku dhimatay 45-Qofood balse sanadkaan ayaa ka halis badan maadaama Duufaanta soo socoto ee Hurricane Sandy ay tahay mid soo gil gishay dalalka Cuba iyo Haiti oo qatarteeda aad loo la socday.
(Dhagayso+Sawiro) Tar tanka Ololaha Doorashooyinka Maamulka Somaliland Oo Maanta Ka Bilaabmay Magaalada Laascaanood Ee Xarunta Gobolka Sool
Tar tanka ololaha doorashooyinka Maamulka Somaliland ayaa maanta ka bilaabmay Magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool, isagoona xisbiga Umadda uu ahaa ka ugu horeeya ee isagu daah furay tar tankani isla markaasna ay gawaadhi aad u tira badan kusoo wareejiyeen qaybaha kala duwan ee Magaalada Laascaanood iyagoona ku dhawaaqayey erayo taageero ah si ay kalsooni uga hantaan bulshada ay ka doonayaan gollaha Deegaanka.
Hadaba ugu dambayntii ayaa dadkani waxa ay isugu soo biya shubteen dadkani xarunta xisbiga Umaddu uu ku leeyahay Magaalada Laascaanood, halkaas oo ay kusoo bandhigeen mas'uuliyiinta u tar tamaysa gollaha Deegaanka waxa ay doonayaan iyo waliba waxa ay qabanayaan marka la doorto.
Isku soo wada tar tankani ayaa kusoo dhamaaday si nabad galyo ah isagoona tar tankani maanta ka bilaabmay Magaalada Laascaanood uu hor dhac u yahay tar tano badan oo ka bilaabmi doona Magaalada Laascaanood kuwaas oo ay xisbiyada u tar tamaya golayaasha Deegaanku ay kusoo bandhi doonaan waxa laga doorto ee ay qaban doonaan.
PROF. JAWAARI: "Howlaha ugu badan ee baarlamaanku qabanayo afarta sano ee soo socota waa la xisaabtanka Xukuumadda"
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in howlaha ugu badan ee baarlamaanku uu qaban doono afarta sano ee soo socota ay noqonayso la xisaabtanka xukuumadda.
Prof. Jawaari wuxuu sheegay in sidoo kale uu baarlamaanku ka tashan doono waxa la gudboon marka uu xilkoodu dhammaado, isagoo sheegay in qorshayaashan oo dhan ay ku xusan yihiin qorshe howleedka baarlamaanka uu dagsaday afarta sano ee uu shaqeynayo.
"Howsha ugu culus ee baarlamaanka waxay noqon doontaa kormeeridda iyo sidii la xisaabtan loogu sameyn lahaa wasaaradaha dowladda," ayuu yiri Prof. Jawaari oo intaas ku daray in wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda lala xisaabtami doono saddexdii biloodba mar.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in baarlamaanku uu yahay mid ku hadlaya afka shacabka, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ku kalsoondaan baarlamaanka, maadaama uu iyaga matalo.
"Wasaarad walba waxaa la weydiin doonaa howlaha u furay, kuwii aan fulin sababta keentay inay fuli waayaan iyo xilliga la fulinayo," ayuu yiri Prof. Jawaari oo intaas ku daray in baarlaamanka ay ka go'an tahay inuu howlihiisa kasoo baxo.
Hadalka guddoomiyaha baarlamaanka Somalia ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo lagu wado in dhawaan lasoo dhiso xukuumad iyo iyadoo xildhibaanadu ay maalmihii lasoo dhaafay ka shaqeynayeen qorhshe howleedkooda afarta sano ee soo socota.
(DAAWO VIDEO) Haweenka Soomaaliyeed ayaa maanta laba meel ku kala doortay hogaankooda ururkooda
aween farabadan ayaa isugu baxay xaflad ay ku dooranayeen hogaankooda cusub ee qaranka Soomaaliya iyadoo ay kasoo qeyb galeen in ka badan 300 oo haween ah kuwaasoo qaarkood ay ka socdeen ururada bulshada rayidka ah.
Dhanka kale waxaa xaflad taas la mid ah ay ka socotay meel kale oo iyadana Muqdisho ka mid ah oo iyana lagu dooranayay isla hogaanka haweenka qaranka Soomaaliyeed
(DAAWO VIDEO) Somaliland oo ka welwelsan inuu sii socon waayo wadahalkii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland
Warqadda oo inta badan ay Xukuumadda Soomaaliland uga hadashay qaabka ay u dooneyso inay wadahadaladu noqdaan ayaa dhinaca kale waxaa ka muuqata kalsooni darro ay ka qabaan nidaamka cusub ee xilligan la wareegay Soomaaliya oo ah mid qunyar socod ah oo aan intabadan laga heli karin hadaladii tuurtuurka ahaa ee Madaxtooyada laga heli jiray, qoraalka ayaa waxaa lagu yiri “Fadlan noo sheega haddii ay idin ka go’an tahay inaad nala xaajootaan oo aad dooneysaan in wadahadaladu sii socdaan iyo haddii aad naan dooneynin”
Ilo wareedyo hoose oo aanu ka helnay xaafiiskeena magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegayaan in warqaddu aysan weli soo gaarin xaafiiska Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, inkastoo Guddigii ay Somaaliland u xilsaartay soo diyaarinta qoraalka arrimahaasi ku saabsan ay sheegeen inay dhameystireen oo waliba ay jawaab rasmi ah muddo todobaad ah ka sugayaan hogaanka Soomaaliya.
(DAAWO VIDEO) GAROOWE : Kalfadhiga 29-aad ee Baarlamaanka Puntland oo furmey
Garoowe:-Kalfadhiga 29-aad ee Baarlamaanka Puntland ayaa furmey maanta waxaana furey M-weynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole,waxaana uu ka hadley Dawlada Somalia, Puntland iyo Jubbada Hoose.
(Daawo Sawiri)Xaflad balaaran lagu soo dhaweyey Madaxweyne Cabdi Mohammed Omar Jaaliyada Somalida itoobiya ee Dalka UAE
Waxaa kadhacay magaalada Dubai ee isku taga dalka Emaaradka carabta xaflad weyn oo lagu soo dhaweyey madaxweynaha Somalida kilinka Shanaad ee Soomali itoobiya Cabdi Mohammed Omar.
xafladaas ayaa aheyd xaflad iskugu dhamayeen soomalida ku dhaqan wadanka imaaraadka .
hadaba xafladaas ayaa aad reer khaatuma utaageray oo meelkasta eey joogaan uga soo qeeb galay xafladaas kuna soo dhaweeyey madaxweynaha Cabdi Mohammed Omar.
waxaa kasoo qeyb galay xafladaas madaxweynihii hore cade muuse iyo Boqorka Buurmadawe oo kasoo jeeda beelaha soomaliland ,siyaasiyiin aad ufara badan iyo tujaar.
hadaba reer khaatuma ayaa waxaa uga soo qeyb galay oo fadhayay xaga marti sharafta Cali cige oo kamid ah G10 ee khaatuma , cabdi magan iyo tacabir oo ah masuulka jaaliyada reer khaatuma ee reer imaaraad.iyagoo aad ugu taagaray dowlad gobaleedka soomalida itoobiya kuna sheegay iney hormar gaareen aad iyo aad uguna faraxsanyihiin kaqeybgalkaas eey kaqeeb galeen xafladaas .
hadaba waxaan idiin soo gudbin doona Video iyo suurada gaar ah iyo war bixino gaar ah oo aan idiin diyaareyneyno
ee kala soco Jornalizem marwalba
Xafiiska Jornalizem ee Dalka UAE
(Daawo Vedio) Barnaamij Gaar Ah Oo Aan Idiinka Diyaarinay Horumarka Balaadhan Ee Ay Ku Talaabsatay Jaamacada Bariga Afrika Faraceeda Magaalada Buuhoodle
Akhyaarta qiimiga naga mudaney waxaana halkan aan idiinku soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aan idiinka diyaarinay booqasho ay ku tageen wufuud heer caalami ah oo ay hogaaminayaan Garaad C/laahi Garaad Soofe iyo Suldaan Siciid Cismaan Cali Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Magaalada Buuhoodle, iyagoona waftigani ay halkaasi kula kulmeen Gudoomiyaha Jaamacada, Macalimiinta wax dhigta Jaamacada iyo sidoo kale ardayda wax ka barata Jaamacada waxa ayna gudaha u galeen waftigani fasalada kala duwan ee ay ka kooban tahay Jaamacadu waxa ayna indho indhayn ku sameeyey qaabka ay u socoto waxbarashada Jaamacadu. Hadana booqashada ay wufuudani ku tageen Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Magaalada Buuhoodle ayaa waxa aanu idiinka diyaarinay barnaamij gaar ah oo aad u xiisa badan kaas oo ka turjumaya horumarka balaadhan ee ay ku taalabsatay Jaamacadu mudadii ay ka furnayd gudaha Magaalada Buuhoodle iyo waliba baahiyaha kala duwan ee haatan ka taagan isla Jaamacada.
Barnaamijkani oo runtii ah mid soconaya wakhti fiican ayaa waxaad kaga bogan kartaa qudbadihii kala duwan ee ay halkaasi kasoo jeediyeen waftigii ay hogaaminayeen Garaad C/laahi Garaad Soofe iyo Suldaan Siciid Cismaan Cali iyo sidoo kale qudbadii aadka u qiimaha badnayd ee uu halkaasi kasoo jeediyey Gudoomiyaha Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Magaalada Buuhoodle Dr. C/shaafi Axmed Cali, isagoona ka hadlay Gudoomiyuhu horumarka balaadhan ee ay Jaamacadu ku talaabsatay isla markaasna wax ka xusay baahiyaha ka taagan haatan Jaamacada iyo qaabka ugu haboon ee wax looga qaban. Hadaba daawo oo ka bago barnaamijkani wixii karaan kaaga ahna u darso oo taageer Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Magaalada Buuhoodle oo ah Jaamacadii ugu horaysay ee guud ahaanba laga hirgaliyey Gobolka Cayn tan iyo markii uu Dalku xoriyadiisa qaatay.
Wixii Faah faahin ah ee intaa dheer waxaad kala xidhiidhi kartaa Gudoomiyaha Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Magaalada Buuhoodle Dr. C/shaafi Axmed Cali Tell:- 00252 24369898 ama 0019258848457.
Xafiiska Wararka Ee Jornalizem.com.com
(Dhagayso) Wafti Ay Hogaaminayaan Madaxweynayaasha Maamulka Khaatumo Oo Koormeero Kala Duwan Ku Maraya Deegaano Ka Tirsan Gobolada Sool Iyo Sanaag
Wufuud heer caalami ah isla mar ahaan taana ay hogaaminayaan madaxweynayaasha Maamulka Khaatumo ee kala ah madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac (Indha sheel) iyo madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash) kana kooban Gollaha madaxtooyada Maamulka Khaatumo, qaar kamid ah Gollaha Wasiirada, iyo sidoo kale madax kale oo aad u tira badan ayaa maalmihii u dambaysay koormeero kala duwan ku marayey Deegaano badan oo ka tirsan Gobolada Sool iyo Sanaag, iyagoona ula jeedka socdaalkooduna uu ahaa sidii ay madaxdani uga hirgalin lahaayeen Deegaanadaasi Maamulada heer deegaan iyo heer tuulo. Hadaba wufuudani oo haatan ku sugan Deegaanka Awr boogays oo ka tirsan Degmada Xudun ee Gobolka Sool ayaa waxaa ii suurta gashay in aan khadka telephone kula xidhiidhno madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac (Indha sheel) oo hogaaminaya wufuudani isla markaasna aan wax ka weydiiyo waxa uu ku salaysan yahay socdaalkoodani iyo waliba cida ku wehelinaysa safarkani Madaxweyne Indha sheel.
Madaxweynaha ayaa xusay in ay socdaalkani ay ku wehelinayaa Gollaha madax tooyada Maamulka Khaatumo qaar kamid ah wasiirada Maamulka Khaatumo ayna ula jeedkoodu uu yahay sidii loo balaadhin lahaa Maamulka isla mar ahaan taana Degmooyinka iyo Tuulooyinka loo samaynayo Maamul u gaar ah.
Sidoo kale mar aan Madaxweyne Indha sheel aan wax ka weydiiyey in Maamulka khaatumo uu isagu magacaabayo xubnaha Maamulka heer Deegaan ee laga hirgalinayo Deegaanadaasi iyo in bulsha weynta ku dhaqan Deegaanadaasi ay iyagu iska soo xulanayaan xubnaha u matali doona Maamulka heer Deegaan ee lagu wado in Deegaanadaasi laga hirgaliyo waxa uuna ka dhawaajiyey in muhiimada ay siinayaan bulshada Deegaanada Maamulka Khaatumo isla markaasna ay iyagu isla soo dhex doorayaan ama ay iska soo xulayaan cidi hogaanka Deegaanka noqonaysa.
Ugu dambeyntii madaxweyne Indha sheel ayaa waxa uu ugu baaqay guud ahaanba umadda soomaaliyeed iyo waliba shacabka reer Khaatumaba in ay taageeraan is badalka cusub ee ka dhashay Dalka Soomaaliya iyo Dowladda cusub ee ka hanaqaaday Dalka, waxa uuna kula dar daarmay in umadda soomaaliyeed ay wakhtigeeda siiso madaxda Dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee koormeerkan ay madaxda sar sare ee Maamulka khaatumo ku marayaan Deegaano ka tirsan Gobolada Sool iyo Sanaag ayaa kusoo beegmaya xili ay wadaan madaxweynayaasha Maamulka Khaatumo iyo bulsha weynta ku dhaqan Deegaanada Maamulka Khaatumo dadaalo la xidhiidha dhanka hirgalinta iyo dhamaystirka Maamulada heer Deegaan.
Sida warku sheegayo waxaa soo xaadiray kulanka dambe Madaxweynaha, Ra’isul wasaaraha iyo afhayeenka Baarlamaanka, waxayna ku wargeliyeen Guddiga farsamada ee maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo in lagu biiriyey Guddi Xildhibaaano ka mid noqonaya Guddiga farsmada, waxayna u sheegeen madaxda dowladdu Guddigii hore in qorshahoodu yahay in labadan Guddi oo isku dhafan ay u fariistaan qaabkii loo sameyn lahaa maamulka Jubbaland ka hor inta aysan arrinta maamul u sameynta gudagelin, bale waxaa la sheegay in arrinkan dambe ay ka biyo diideen Guddigii farsamada ee Nairobi ka yimid, waxaana la sheegay inay madaxda dowladda ku wargeliyeen in Guddiga Xildhibaanada ah ee ay doonayaan iany ku biirayaan Guddiga farsamada ay u soo dirsadaan shirka Kismaayo ka dhici doona si ay goobjooge ugu noqdaan, waxayna ku doodeen in qorshaha maamul u sameynta Jubbooyinka iyo Gedo uu hadda maraya meel gabogabo ah.
Somaliland oo ka welwelsan inuu sii socon waayo wadahalkii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, warqad cabasho ahna u dirtay….
ONLF oo faah faahin ka bixisay waxyaabihii hakadka galiyey wada hadaladii ay lalahaayeen dowladda Ethiopia
Jaaliyadda Ogadenia ee dalkan Kenya ayaa maanta qabatay shir ay kaga hadlayeen wada hadaladii hakadka galey ee jabhadda ONLF iyo dowladda Ethiopia.
Wada hadalada u dhaxeeyey jabhadda ONLF iyo dowladda Ethiopia ayaa waxeu bilawdeen 15-kii bishan October, 2012-ka, wuxuuna istaagey 17-kii October, 2012-ka.
Wada hadaladan ayaa waxaa dhax dhaxaadineysay labadda dhinac dowladda Kenya, waxaana kor joogta ka ahaa dowlado Reer Galbeed ah, waxaase laga yaabaa sida wararka shirka ku dhawdhaw ay tilmaamayaan in wada hadalada ay mar kale dib u bilawdaan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ku jira wadatashiyadii ugu dambeeyay ee Magacaabista Golaha Wasiirrada
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shir-doon (Saacid) ayaa ku jira wadatashadiisii ugu dambeeyay ee uu kusoo magacaabayo golihiisa wasiirrada, inkastoo aan la ogeyn xilliga uu rasmi ahaan ugu dhawaaqayo.
Soomaaliya ayaa bishii Ogoosto ee sannadkan ka baxday xilligii KMG-ka ahayd ee ay kusoo shaqeynsay 12-ka sano, iyadoo la doortay madax cusub, kuwaasoo ballan-qaaday inay horseedi doonaan in shacabku ay soo doortaan hoggaamiyeyaashooda marka laga gudbo afartan sano ee soo socota.
Magaalooyinka Laascaanood Iyo Buuhoodle Oo Ku Waabariistan Jawi Ka Duwan Kii Hore
Waxaa guud ahaanba ay saaka ku ciideen Magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle jawi ka duwan kii hore, iyagoona Magaalooyinkaasi ay ka bilaabmeen roobab lagu diirsaday kadib markii laga soo dareeray salaadii subax saaka waxaana sidoo kale ay roobabkani ahaayeen kuwa inta badan aan lahayn biya dhig fiican. Bulshad weynta ku dhaqan Magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle ayaa saaka inta badan kusoo waabariistay jawi farxadeed kaduwan kii hore iyo waliba saan saan roobaad, kadib markii ay maalmihii ugu dambaysay uu jawiga guud ee Magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle uu u e kaa ama loo badinayey in roobab fiicani ay helaan Deegaanadaasi.
Magaalada Laascaanood oo uu inta ka da'ay roob aad u xoog badan oo soconayey mudo saacado ah isla markaasna haatan sii soconaya waliba sii xoogaystay ayaa waxa uu sababay in dad weynaha ku dhaqan Magaalada Laascaanood aysan u suurtoobinta in ay ku tukadaan salaadii ciida goobihii hore ay ugu tukan jireen amaba ay isugu soo bixi jireen si ay u gutaan waajibaadkooda.
Sidoo kale waxaa hakad galay isu socodka ama kala gooshida gadiidka ay u kala gooshi jireen Deegaanada ku hareeraysan Magaalada Laascaanood. Jawi guud ayaa ah mid loo saadaalinayo in roobab mahiigan ahi ay ka da'aan Magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle, inkastoo roobka da'ay Magaalada Buuhoodle uu yahay mid tibix laa oo aan lahayn wax biya dhig fiican ah hadana bulsha weynta ku dhaqan Magaalada Buuhoodle ayaa si weyn u soo dhoweeyey raxmaadkan eebe ka bilaabmay Magaalada Buuhoodle walowse ay roobab fiicani ka da'een Deegaanada kale ee ku hareeraysan.
Si kastaba ha ahaatee bulsha weynta ku dhaqan Magaalooyinka Laascaanood iyo Buuhoodle ayaa si weyn u soo dhoweeyey raxmaadka eebe ee ka bilaabmay Deegaanadaasi, iyagoona bulsha weynta ku dhaqan Deegaanadaasina ay si weyn uga dhur sugayeen maalmihii u dambaysay in roobab fiican ka da'aan Deegaanadaasi.
War Deg Deg :Tirada Wasiirada Xukuumada cusub oo la isku mari waysan yahay Ayada oo Larajeeynayo in lasoo magacaabo waqtiyada inagu soo aadan!!
Xarunta Madxatooyada ee Villa Soomaaliya ayaa caawa laga dareemayaa mashquul ka badalan sidii hore waxaana heer gabo gabo ah maraya Xulitaanka Wasiirada Cusub ee kamid noqonaya Xukuumada Cusub uu soo dhisayo R/Wasaare Cabdi Faarax Sheyrdoon (Saacid).
Golaha Wasiirada Cusub ayaan inta badan la diyaariyay kuwaa oo hada Wararka aan ka heleyno Madaxtooyada sheegayaan in Liiskooda iyo Xillaka ay ka qabanayaan Xukuumada Cudsub ee diyaarsan yihiin lagana yaabo in saacadaha soo aadan lagu dhawaaqo.
Warar aan helnay ayaa sheegaya in Madaxweynaha iyo R/Wasaare ay isku mari waayeen tirada kamid noqonaya Xukuumada Cusub ,Madaxweynaha ayaana R/Wasaaraha ka codsaday in aad loo koobo golaha Wasiirada lagana dhigo ilaa 9-Wasiir halka uu soo jeedintaasi kabiyo diiday R/Wasaaraha Somalia
R/Wasaare Saacid ayaana mdaxaweynaha u sheegay in Wasiirada loo baahanyahay in intaas laga kordhiyo ugu yaraan laga dhigo ilaa 14-Wasiir si loo qanciyo inta badan Beelaha waa weyn ee Soomaaliyeed .
Ismariwaa saacado qaatay ayaa ugu dambeyn Wararka aan caawa ka heleyno Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweynaha iyo R/Wasaarah ay isku raaceen tirade Wasiirada in ugu yaraan laga dhigo ilaa 14-Wassiir ,waxana la sheegay in labada dhinac ay isku raaceen sida aan Wararka ku helnay.
Waxaana la saadaalinayaa in In R/Wasaare Saacid 24-saacadood gudahood laga yaabo in uu ku dhawaaqo Golaha Wasiirada inkastoo ay suurto gal tahay in saacado kale dib u dhacaan Maadaama qaar badan oo Wasiirada Cusub kamid noqonaya ku maqanyihiin Boqortooyada Sacuudiga Carabiya kuwaa oo halkaa u aaday gudashada Xajka.
Wasiirada Cusub ayaana noqonaya inta badan Wajiyo ku cusub Siyaasada Soomaaliya waxaana kasoo dhax muuqan doono rag sar sare oo katirsan Xisbiga Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya PDP oo iyagu inta badan qaatay inta ugu muhiimsan Wasiirada Xukuumada Cusub.